ပန်းကလေးများမနွမ်းစေချင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ပန်းကလေးများမနွမ်းစေချင်
Posted by Foolish Girl on Sep 26, 2016 in My Dear Diary | 14 comments
ခုခေတ်မှာ သမီးရည်းစားဖြစ်တာနဲ့ Living Together နေကြတာပိုပြီး ခေတ်ထလာတယ် ပိုပြီးတွေ့လာ မြင်လာ ကြားလာနေရတယ်။
အရင်တုန်းကမရှိဘူးလားလို့ပြောတဲ့သူရှိရင် တော့ ဟုတ်အရင်ကလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုခေတ်လောက်တော့ ပေါ်ပင်မဟုတ်ဘူးပေါ့။
နောက်ထပ်အဆိုးဝါးဆုံးသတင်းက Ezee2 ဆိုတဲ့ တားဆေးလေးတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရောင်းရဆုံးဆေးဖြစ်နေတာပါပဲ။
ဒါကဘာကိုပြသနေလဲ ဖော်ညွှန်းနေလဲဆိုတာ ရွာသားတွေနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဟိုးအရင်ခေတ်တွေတုန်းက မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းမြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာ အတော်ကိုမလွယ်ဘူး။
ဒီတော့ ကိုယ့်ချစ်သူ (ကိုယ်လက်ထပ်မယ့်မိန်းကလေး) ကို ရယူပိုင်ဆိုင်ရဖို့ ၃ နှစ်၃ မိုး ယောက်ခမကြီးမျက်နှာသာပေးအောင်ကြိုးပမ်းပြီး မိသားဖသားပီပီ တောင်းရမ်းလက်ထပ်ကြတယ်။
မြန်မာပြည်သိန်းတန်သီချင်းလို “အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါပဲ” လို့ပဲပြောရမှာပေါ့။
ခုတော့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းမြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လွယ်ကူလာတဲ့ခေတ်။
မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ အတူအိပ်ရဖို့ talky ကောင်းကောင်းလေးပစ်တတ်ယုံနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူရတဲ့ခေတ်။
ဘယ်မှာဘဲ မိန်းမတစ်ယောက်တန်ဖိုး ….
ကိုယ်ဝန်ရမှ တောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ ယူပါပြောရတဲ့ခေတ်။
လက်ထပ်ဖို့ငွေမလောက်သေးလို့၊ အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးလို့ ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ တရားဝင်မယူဘဲ
လိုအပ်တိုင်းရတဲ့အရာအားလုံး အလကားယူကြတဲ့ခေတ်။ (ဒါတောင်မိန်းကလေးကပေးကမ်းရတာနော် ဓါးထိုးမှုတွေကသာဓကပေါ့)
ဘယ်သူနဲ့ရမှန်းမသိတာကို လှည်းကျိုးထမ်းခိုင်းတယ်လို့ပြောကြတဲ့ခေတ် အစအစရှိသဖြင့်…
ခုခေတ်မှာက ရည်းစားဖြစ်ပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့ Hotel မှာချိန်းတယ်။ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းလက်တို့ပြောတဲ့စကားတွေက ဘယ် Hotel ကောင်းတယ်။
ဘယ် Hotel သန့်တယ် ဒါတွေပဲမေးကြပြောကြတယ်။
ထားပါ ဒါအနောက်နိုင်ငံက ကူးစက်လာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုလို့ပေါ့။
ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတွေသိစေချင်တဲ့ သိထားရမယ့်အရာက
နံပါတ်(၁) ကိုယ်နေတဲ့နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာပဲ ။
ရည်းစားရှိတယ်။ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်တောင်ကောင်းကောင်းမသိသေးဘဲ Living Together နေတယ်။
နောက်ကြာလာတော့ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်ပိုသိလာကြတယ်။ လက်မခံနိုင်စရာ ညှိနှိုင်းလို့မရတာတွေဖြစ်လာတယ်။ ဒီတော့ ကွဲကြကွာကြပေါ့။
ဟုတ်ပြီ နောက်ထပ်အချစ်ထပ်တွေ့တယ်ဆိုပါတော့ အဲဒီအချစ်သစ်နဲ့လည်းဒီလိုပဲနေလာကြတယ်။
(တစ်ချို့တစ်လေကတော့ခြွင်းချက်အနေနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ကိုကို မစဉ်းစားဘဲ မပျော်တွဲတဲ့မိန်းကလေးယောက်ကျားလေးတွေလည်းပါတယ်နော် သူတို့ဆိုပိုဆိုး)
မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေက အနောက်နိုင်ငံရဲ့ Living Together ကိုတော့အတုယူတတ်ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့စိတ်က အနောက်နိုင်ငံကလူတွေလိုမဟုတ်ဘဲ မြန်မာစိတ်ကရှိနေသေးတယ်လေ။
ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့မိန်းမဖြစ်မယ့်သူက အဲလိုလူမျိုးသူမလိုချင်ဘူး အဲဒီမျိုးကိုလည်းလက်မခံနိုင်ဘူး
ဒါဆိုလည်ှးဗျာ တစ်ခြားမိန်းမတွေကိုမဖျက်စီးပါနဲ့လားလို့မေးရင်တော့ အဖြေပြန်ရမလား မရဘူးလားဆိုတာမပြောတတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့်သေချာတာတော့ မတုနဲ့လေ ဆိုတာမျိုးတော့ကြားရကောင်းကြားရပါလိမ့်မယ်။
နံပါတ်(၂) အနေနဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေပါ
မိနစ်အပိုင်းအခြားလောက်လေးကိုယ့်ချစ်သူသာယာဖို့အတွက် ကိုယ့်ဘ၀တစ်ခုလုံးကို အကြောင်းမသိတဲ့သူကို ပေးဆပ်ရဲတဲ့ မိန်းမတွေရဲ့အချစ်ကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တော့ အဲလိုမိန်းကလေးတွေက ရူးမိုက်လိုက်တာဆိုတဲ့ စုတ်သပ်တဲ့ သက်ပြင်းချ ကဲ့ရဲ့ကြတဲ့ အသံတွေကိုပဲကြားရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။
ကူးစက်ရောဂါရလာပါပြီတဲ့ ကဲ ဘာပြောကြမယ်ထင်ပါသလဲ?????????
သူများတွေမပြောနဲ့ ကိုယ်ယုံလို့ပုံအပ်မိတဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူကတောင် သူ့အပြစ်လို့မထင်ပဲ ကိုယ့်အပြစ်လို့ထင်ပါလိမ့်မယ်။
လူတွေအားလုံးရဲ့ ဟိုလိုလိုဒီလိုလို အကြည့်တွေကိုခံရလိမ့်မယ်။
စဉ်းစားကြည့်ပါ ဘယ်မိဘကမှ သူတို့ကလေးတွေကို ဒီလိုရောဂါအမွေမျိုး ပေးချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
မြန်မာမိန်းမပျိုသမီးပျိုလေးများ ကို မိန်းမပြို သမီးပြိုလေးတွေမဖြစ်စေချင်ပါ….
နှလုံးသားနဲ့ခံစားပါ ဦးနှောက်နဲ့စဉ်းစားပါ အချစ်ဟာဘ၀မဟုတ်ပါ
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း တွေ့နေရပါတယ် ဒီလိုမျိုးတွေ
ကိုရီးယားကားတွေဝင်လာပြီး နောက်ပိုင်း အရက်သောက်တာရော
ပြီးတော့ပြောသေးတာ မြန်မာတွေက သိပ်ရိုးတာ သိပ်ယဉ်ကျေးတာ တဲ့
ကျွန်မမြန်မာလူမျိုးပါ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအပြုအမူရှိတဲ့သူက ဒီလိုအပြောမျိုးပြောတတ်တဲ့သူကိုတွေ့ရင် ပြေးကန်ချင်စိတ်ပေါက်တယ်
မြန်မာပြည်သိန်းတန် ကို အာရုံများနေလို့ဟဲဟဲ
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာက ကျားမ တန်းတူ ဆိုတဲ့ အနေမျိုး။ မြန်မာပြည်မှာက ဟိုးခေတ်ကတည်းက မိန်းကလေးတွေကို တန်ဖိုးထားသလိုလိုနဲ့ နှိပ်ကွပ်ခဲ့တာပါ။ အပျိုစစ်မှ၊ ဒီ့အပြင် မယားပြိုင် ဥပဒေ ရှိသေးတယ်။ ဒါတွေနဲ့ မိန်းမထုကို နှိပ်ကွပ်ခဲ့တယ်၊ အခု တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေ ပြဌာန်းထားလည်း (မပြည့်စုံပေမယ့်) တခြား မိဘအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ ဖိနှိပ်မှု ဆိုတာ ရှိနေတာပါပဲ။ အမကတော့ living together ကိုထောက်ခံပါတယ်။ ဒီရွာထဲမှာ အဲဒါကို ထောက်ခံတဲ့အကြောင်း ကွန်မင့်တွေ အများကြီး ရေးခဲ့ဖူးလို့ ရွာ့မေတ္တာလည်း ခံယူပြီးသွားပြီ။
ဒါပေမယ့် အခု ပို့စ်ထဲကလိုပဲ။ living together က မြန်မာပြည်မှာ နည်းနည်းစောနေသေးသလိုပဲ ထင်မိပါတယ်။ သီဝရီပိုင်းအရမှာ living together မှန်ကိုမှန်တယ်။ဒါ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အစ။ လက်တွေ့ပိုင်းအရမှာတော့ အမကိုယ်တိုင် သံသယတွေနဲ့ပဲ။ ငါ့အတွေးအခေါ်တွေ မှန်မှမှန်ရဲ့လားလို့ ပြန်စစ်တမ်းထုတ်နေရတဲ့ အချိန်ပါ။
ဒီတော့ Living Together ကိုလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့ယောက်ကျားတစ်ယောက်က သူ့အဖော်မိန်းကလေး အဲလိုအခြေအနေဖြစ်ခဲ့ဘူးတာကို လက်ခံပေးနိုင်ရမှာပေါ့ အဲဒီလိုလူတွေကိုယ်တိုင်က Living Together နေခဲ့ဖူးတာမပြောနဲ့ ရည်းစားတစ်ယောက်ထားဖူးရင်တောင်လက်မခံချင်ကြဘူး
Living Together ကိုလက်မခံမကျင့်သုံးတဲ့ ယောက်ကျား တွေကိုမရည်ညွှန်းလိုပါဘူး
အန်တီပြောတာလည်းမှန်ပါတယ် ဒါပေမဲ ဒီမှာကတော့စောနေသေးတယ် အနောက်နိုင်ငံမှာတော့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့
မြန်မာယဉ်ကျေးမှူ့ အရရော လူတွေကြောင့်ရော living together ကိုလက်ခံကြမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါတွေအပြင်
ယောက်ျားတွေက သူတိုတစ်သက်လုံးလက်တွဲသွားမယ့်မိန်းကလေးဆို ခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင်လိုချင်ကြတာ
ဘာပဲ လုပ်လုပ် အကျိုးဆက်ကိုခံနိုင်ရင် လုပ်ကြပေါ့။
အဲလိုနေကြရင်းက ကလေးရသွားလို့ ကောင်လေးကလည်းတာဝန်မယူနိုင်သေး
အသိအစ်မတစ်ယောက်ဆိုပျောက်လို့လိုက်ရှာကြမှ ဖျက်ချပေးတဲ့ လူက သေသွားလို့ ထောင်ကျမှာဆိုးတာနဲ့ စဉ့်အိုးထဲထည့်ပိတ်ထားခံထားရတာတွေ့ခဲ့ရတယ်။ အဲလိုရင်နင့်ဖွယ်အဖြစ်တွေမြင်တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်။
ဒါတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်သူမှားတယ်မှန်တယ်တော့ မပြောတတ်ဘူး
ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ရှိတယ် Living Together ကို လက်မခံနိုင်သေးတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာဖြစ်နေသေးတာရယ် မိန်းကလေးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း မရှက်သင့်တဲ့နေရာတွေမှာရှက်နေကြတာကြောင့်ရယ်ပေါ့
ကိုယ့်ချစ်သူကိုအရမ်းချစ် အရမ်းယုံတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်အတွက်တော့ ပြောသလောက်မလွယ်ဘူးထင်တာပဲလေနော်
မပြောတတ်တော့ဘူးကွယ် အကျိုးရှိလို့ အကြောင်းဖြစ်တယ် အကြောင်းရှိလို့ အကျိုးဖြစ်တာပေါ့ကွယ်
အိုက်လိုနဲ့ပဲ မြန်မာပြည်လည်း. . . သမီးရည်းစားရေး အိမ်ထောင်ရေး ဘာညာသာလကာရေးတွေမှာ အရင်လို
ထိတ်တလန့်လန့်နဲ့ တွန့်တဆုတ်ဆုတ် ဆက်လက် ချီတက်ကြလေသတည်း. . .ပေါ့နော်။
.ပြောချင်တာ ရှိတယ်။ ကိုယ့် နဲ့ သိပ်မရင်းနှီးသေးတဲ့ ပိုစ့်မှာမို့ မပြောသေးဘူး။
.ပြောမနာ ဆိုမနာတွေ ဒါမျိုး ပြောမှ ပြောချင်တာတွေ ထပ်ပြောတော့မယ် သပ်လား
မိန်းမဂေါင်းလေး ဖစ်တဲ့ နာကတော့ ဘားးမှ ဝင်မပေါဒေါ့ဘု။
မူလတန်း.. အလယ်တန်းပညာရေးမှာ.. လိင်ပညာပေးကိုထည့်သင့်တယ်..။
ခေတ်မှီပညာပေးအစီအစဉ်တွေဟာ.. ယဉ်ကျေးမှုမျက်နှာဖုံးတပ်ထားတဲ့.. မြန်မာ့ဓလေ့ကို.. ဖျက်စီးပစ်သင့်တယ်..။
လူသားဆန်စွာ.. ငယ်တုံး.. ပျော်နိုင်ကြစေ..။
စိတ်ကူးယဉ်ပြီး အငှားနေရာဝင်စားလို့LVနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဒီလို ဟိုလို မကောင်းဘူးတော့ မပြောချင်ဘူး ။ ကောင်းတယ်လည်း မပြောချင်ဘူး ။ ဆိုလိုတာ က အားပေးအားမြှောက် မလုပ်သလို မရှုံ့ ချချင်တာပါ ။ လူနှစ်ဦးလက်ထပ်တယ် ပေါင်းသင်းတယ် တိတ်တိတ်ပေါင်းသင်း ဆိုတာ သူတို့ နှစ်ဦးနဲ့ပဲ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စမို့ ဘေးလူ အမြင်နဲ့ မဝေဖန်ရက်ဘူး ။ သူတို့ အဆင်ပြေလို့ အတူနေတယ် အဆင်မပြေလို့ ကွဲတယ် ကိုယ့်အပေါ် သက်ရောက်မှု မရှိဘူး ။ ကိုယ့် ဇာတ်ကိုယ်ရှင်း ကိုယ်နိုင်လျှင်သွားပေါ့ ဒီလိုပါ ။
ပြောရလျှင် ဗိုင်းကောင်းကျောက်ပိဆိုတဲ့ စကားက နားထဲ အတော် ကန့်လန့်ရယ် ။ အမှန်က discriminate အလုပ်ခံရတဲ့ မိန်းမဘ၀ကို အားပေးနေသလိုမျိုး ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင်လည်း မလိုချင်သလို သူများကိုလည်း မရစေချင်ဘူး ။
ကိုယ့် နှမသားချင်း ကိုယ့် သမီး ကိုယ့်တူမ ဒုက္ခမရောက်အောင်တော့ တတ်နိုင်သမျှ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေပြောပြထားမယ်ဆို သူတို့ ဘ၀ သူတို့ စောင့်ရှောက် နိုင်ပါလိမ့်မယ် ။